Dalxiiska wax soo saar ayuu leeyahay dalxiiskuna waa suuq geyn
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » News » Dalxiiska wax soo saar ayuu leeyahay dalxiiskuna waa suuq geyn
Wasiirka Alain St.Ange, Wasiirka Seychelles ee mas'uulka ka ah Dalxiiska iyo Dhaqanka, oo uu weheliyo David Germain, oo ah Agaasimaha Guddiga Dalxiiska Seychelles ee Ameerika & Afrika, ayaa ku jira
Wasiirka Alain St.Ange, Wasiirka Seychelles u qaabilsan Dalxiiska iyo Dhaqanka, oo uu weheliyo David Germain, Agaasimaha Gudiga Dalxiiska Seychelles ee Ameerika & Afrika, ayaa ku sii jeeda Brazil si ay ula kulmaan warbaahinta waaweyn iyo ciyaartooy ka socda dalxiiska. warshadaha. Booqashadooda oo ku saabsan casuumaadda Emirates ayaa ujeedkeedu yahay in la xoojiyo iskaashiga ay la leedahay shirkadda duulimaadka ee la shaqeyneysa hawlwadeennada dalxiiska ee South America ee ka kala socdaalaya Brazil iyo Seychelles. David Emirates iyo Gisele Abrahao oo ka tirsan xafiiska dalxiiska dalxiiska ee Brazil ayaa yidhi: "Emirates weli waa shirkad ganacsi oo aad muhiim u ah taas oo fure u ah in xitaa la kordhiyo tirada dalxiisayaasha reer Brazil iyo kuwa koonfurta America u tagaya jasiiradaha".
Wasiirka Alain St.Ange, oo ku sii jeeda ka qayb galka Golaha Guud ee UNWTO (Ururka Qaramada Midoobay ee Dalxiiska Adduunka) ee Kolombiya ayaa joogsanaya Brazil kadib casuumaad ay ka heshay Imaaraatka oo ku saabsan dhacdada ganacsiga dalxiiska.
Dalxiiska Seychelles wuxuu sii wadaa inuu ka shaqeeyo maxalliga ah maadaama aan ognahay inaan u baahanahay inaan ka shaqeyno adduunka. Inaad naga dhigato mid muuqda waxay hubineysaa inaan sii ahaano mid muhiim ah, ”ayuu yiri wasiirka St.Ange oo lahadlay saxaafada reer Brazil wareysi telefoon. Markii wasiirka wax laga waydiiyay casuumaadan ay u fidisay shirkada Emirates oo ay ugu talagashay saxaafada iyo safarada ganacsi ee magaalada Sao Paulo waxa uu ku jawaabay: “Gudigeena Dalxiiska ayaa had iyo jeer aaminsan in jasiiradeena ay u baahan yihiin isku xirnaan wadaag si loo abuuro muuqaal aan u baahanahay. Waan ognahay inay tahay inaan leenahay wadid wadaag ah suuqyadeena bartilmaameedka ah ee kala duwan, maadaama aan diirada saareyno halka aan ku socono qorshaheena waxqabadka. Waan ognahay in hogaamiyeyaal ahaan aan u baahannahay inaan ogaano halka aan ku dhiirigalineyno kuwa kale inay nala raacaan. Koonfurta Ameerika iyo Ameerika waxay weli bartilmaameed u yihiin Seychelles, tani waan wada ognahay waana sababta aan u sii wadayno la shaqeynta shuraakada si ay nooga caawiso horumarinta suuqan suurtagalka ah, ”ayuu yiri Wasiir St.Ange.
9ka iyo 10ka Sebtember, Wasiirka Alain St.Ange iyo David Germain, oo ah Agaasimaha Golaha Dalxiiska Seychelles ee Ameerika & Afrika, oo uu weheliyo Mr. Stephane Perard, Maareeyaha Guud ee Emirates Airlines ee Brazil, waxay la kulmi doonaan daabacaadda warbaahinta ugu sareysa, sida Folha de Sao Paulo, oo ah wargayska ugu weyn dalka ee gaadha boqolaal kun oo qof; the R7, oo ah bogga labaad ee ugu weyn ee laga helo internetka oo ay la socdaan dhagaystayaal ka badan 60 milyan oo qof bil kasta; iyo Panrotas, oo ah daabacaadii ugu weyneyd ee ganacsiga ee dalka ka jirta. Marka laga soo tago wareysiyada shaqsiga ah, waxay sidoo kale ka qeybqaadan doonaan quraac lala yeelanayo qorayaasha waaweyn ee wax qora iyo kuwa madaxa banaan.
Casho qaas ah, oo ay kafaala qaadeen Golaha Dalxiiska ee Seychelles iyo Shirkadda Diyaaradaha ee Emirates ayaa dhici doonta 9ka Sebtember laga bilaabo 7:30 pm ilaa 10:30 pm waxaana la arki doonaa kaqeybgalka 30 + dalxiis ee ugu sareeya Brazil. "Waxqabadyadani waa kuwo aad muhiim u ah si kor loogu qaado soo-gaadhista Seychelles ee suuqa iyo abuurista fursado cusub oo kordhin doona baahida dalxiisayaasha reer Brazil ee jasiiradeenna qurxoon," ayuu yidhi David Germain.
Seychelles waa xubin aasaasi ah Isbahaysiga Caalamiga ah ee Wada-hawlgalayaasha Dalxiiska (ICTP) .